Inona avy ireo loharano angovo: karazana, toetra ary fampiasa | Fanavaozana maintso
Portillo Alemanina | 29/07/2021 10:00 | Angovo azo havaozina
Mila ny olombelona Loharanon-kery mba hamaly ny fangatahana sy hananana fari-piainana ananantsika ankehitriny. Ny loharano angovo izay mamatsy ny tanànantsika, ny indostria sns dia tsy mitovy. Ary ny tsirairay amin'izy ireo dia avy amin'ny saha azo havaozina na tsy azo havaozina.
Amin'ity lahatsoratra ity dia holazainay aminao hoe inona avy ireo loharano angovo, inona ireo karazana isan-karazany misy ary inona no niandohan'izy ireo sy nilainy.
1 Inona avy ireo loharano angovo
2.1 Loharanon-kery azo havaozina
2.2 Loharanon-kery tsy azo havaozina
3 Loharanon-kery any Espana
4 Azo havaozina any Espana
Alohan'ny hanazavanao ireo karazana misy rehetra dia ilaina ny manazava ny atao hoe loharano angovo. Izy io dia loharanom-pahalalana izay ahazoana angovo azo amin'ny tanjona samihafa (ara-barotra indrindra). Nefa na izany aza, tsy izany foana no izy.
Taloha dia nampiasa loharanon-karena voajanahary manan-danja ny olombelona hamaly ny filany. Rehefa nahita afo izy, ny tanjon'ireo lelafo ireo dia ny hiarovana azy amin'ny hatsiaka sy handrahoana sakafo ho azy. Na dia manohy mampiasa afo aza izahay noho ireo tanjona ireo, ny loharanom-pahalalana ambiny (voajanahary na artifisialy) dia efa namokatra angovo azo ampiasaina amin'ny toby famokarana herinaratra na amin'ny indostria.
Tamin'ny faran'ny taonjato faha-XNUMX dia nanomboka nalaina am-bavany ilay maodely momba ny angovo noho ny antony roa:
Olana ara-tontolo iainana ateraky ny fandoroana solika fôsily, toy ny fizarana setroka any amin'ny tanàna lehibe toa Londres na Los Angeles, na ny fanafanan'ny tany ny planeta.
Ny loza ateraky ny fampiasana angovo nokleary, naseho tamin'ny lozam-pifamoivoizana toa an'i Chernobyl.
Ny fahafantarana ny famaritana ny angovo dia afaka manomboka mandinika ny fanasokajiana azy isika.
Loharanon-kery azo havaozina
Fantatra amin'ny anarana hoe angovo madio, ny angovo azo havaozina no zava-dehibe indrindra satria izy io dia mitana andraikitra lehibe amin'ny fiarovana ny tontolo iainana sy ny fampandrosoana teknolojia. Ireo loharano angovo ireo dia mampiasa loharano tsy lany daty avy amin'ny natiora (toy ny taratry ny masoandro, rivotra, rano sns) hanovozana angovo. Isan'ireo loharanom-baovao angovo azo havaozina misy antsika ireto:
Angovo avy amin'ny masoandro: Araka ny anarany, io angovo io dia mampiasa tara-masoandro hamokarana herinaratra. Ary koa, noho ny fivoaran'ny teknolojia, ny angovo azo avy amin'ny masoandro dia nanangana ireo takelaka mpamokatra masoandro malaza sy fiara mpamokatra masoandro.
Herinaratra mandeha amin'ny herinaratra: Tsy toy ny karazana angovo teo aloha, ny hydropower dia mampiasa rano hiteraka angovo. Ity dingana ity dia atao ao amin'ny tohodrano na toby famokarana herinaratra elektrika.
Herin'ny rivotra: Raha niresaka momba ny harena voajanahary isika dia fotoana tokony hiresahana ny rivotra. Izy io dia manana anjara toerana lehibe amin'ny herin'ny rivotra, izay tompon'andraikitra amin'ny famokarana herinaratra amin'ny alàlan'ny turbinina na valin-drivotra.
Biomassa: Izy io koa dia misy ifandraisany amin'ny fampiasana ny tara-masoandro hamokarana angovo voajanahary.
Angovo geothermal: ny fampiasana angovo geothermal, izay iray amin'ireo loharano angovo azo havaozina lehibe.
Thermodynamics: Raha miresaka an'ity karazana angovo ity isika dia mbola zava-dehibe amin'ny famaritana loharano azo havaozina ny hafanana.
Loharanon-kery tsy azo havaozina
Ho azy ireo, ny angovo tsy azo havaozina dia mampiasa loharanon-karena voajanahary azo lany daty, io no tena mahasamihafa ny angovo azo havaozina sy ny tsy azo havaozina. Mandritra ny fampiasana sy fitrandrahana azy ireo, ny loharano ahazoana ny angovo dia azo vonoina na mitaky fotoana hamelomana indray, ka mahatonga azy ireo ho loharanon-kery malemy indrindra. Ao amin'ny fanasokajiana azy no ahitantsika:
Solika fosil, toy ny menaka, arina, na gazy voajanahary: Ireo loharanom-pahalalana ireo dia ho lany tsy ho ela, ary miankina amin'ny faritra eto amin'ity tontolo resahintsika ity dia mety tsy misy akory izy ireo. Raha miresaka fahalotoan'ny tontolo iainana isika, ny fampiasana azy, ny fampandrosoana ary ny fitaterana dia miteraka risika lehibe, ary ny ampahany amin'izany no tompon'andraikitra.
Angovo nokleary: Fantatra amin'ny anarana hoe angovo atomika, ity angovo ity dia mitana andraikitra lehibe amin'ny fizika ary heverina ho iray amin'ireo loharanon-kery lehibe eto amin'ny fireneko.
Loharanon-kery any Espana
Raha mifantoka amin'ny angovo any Espana fotsiny isika dia hahita ny fampiasana loharano azo havaozina sy tsy havaozina. Na izany aza, ny fampiasana loharanon-karena tsy azo havaozina dia avo lavitra noho ny an'ny angovo azo havaozina, izay mety hidika ho loza amin'ny natiora.
Ny sehatry ny angovo ao Espana dia maneho ny 2,5% amin'ny harinkarena anatiny (PIB), izay maneho ny maha-zava-dehibe azy amin'ny hetsika ara-toekarena rehetra. Ankoatr'izay, ity dia iray amin'ireo loharanom-pahalalana ilaina indrindra amin'ny Espaniola, ary azontsika atao ny mampiseho azy amin'ny asantsika isan'andro any an-trano na any ivelany.
Araka ny fanambarana tamin'ny septambra 2019 navoakan'ny Orinasa Mena Vaovao Espaniola (REE), ny famokarana herinaratra ao amin'ny firenena dia avy amin'ny loharanon-karena tsy azo havaozina. Miteraha herinaratra isam-bolana amin'ny alàlan'ny angovo nokleary, tsingerina mitambatra, cogeneration ary arina.
Raha raisina ny fiheverana fa ny fampiasana ireo loharanon-karena tratra dia misy fiatraikany lehibe eo amin'ny firenena ary, mazava ho azy, amin'ny planeta, dia zava-misy fa ilaina ny manova an'io toe-javatra io. Mifanohitra amin'izany no izy, ny filamatra dia ny fampiasana ireo harena voajanahary tsy mety ritra ary mampivelatra azy ireo amin'ny fomba feno fanajana amin'ny alàlan'ny fampiasana ireo loharano azo havaozina.
Azo havaozina any Espana
Any Espana, ny fomba lehibe hamokarana herinaratra avy amin'ny loharano azo havaozina dia ny angovo avy amin'ny rivotra, arahin'ny angovo avy amin'ny herinaratra, ny angovo azo avy amin'ny masoandro ary ny angovo azo avy amin'ny masoandro. Na izany aza, araka ny efa noresahintsika teo aloha, ny zava-misy fa ny fampiasana ireo loharano tsy azo havaozina dia lehibe kokoa noho ny fampiasana ireo loharano azo havaozina dia mikasika sy mila ovaina.
Amin'izao fotoana izao dia mihamaro ny orinasa manolo-tena hanatsara izany toe-javatra izany. Na izany aza, tsy azo atao ny mamela ny andraikitra rehetra amin'ny orinasa mpamokatra; izahay, avy any an-tranontsika sy ny zavatra fanaontsika isan'andro (any am-piasana na eny an-dalambe), afaka manampy amin'ny fampihenana ny fanjifana angovo isika, noho izany mampihena ny fangatahana angovo, satria ny fampihenana ny fangatahana ireo loharano ireo dia zava-misy izay mandratra antsika manerantany.
Ny asanay dia ny mianatra mitsitsy angovo ary mamela ny indostria hiloka amin'ny loharanom-baovao azo havaozina. Io fomba io ihany no ahafahantsika misoroka ny solika fandotoana sy ny fandotoana tsy hanimba ny tontolo iainana.
Manantena aho fa miaraka amin'ity fampahalalana ity ianao dia afaka mianatra bebe kokoa momba ny loharano angovo sy ireo loharano misy.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Fanavaozana maintso » Angovo azo havaozina » Inona avy ireo loharano angovo
Inona no atao hoe fanodinana